က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man ကင်းလွတ် Corporation ၏ကျွန်း
က Man ၏ကျွန်းတစ်ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက် Self-အစိုးရနှင့်အတူ 1866 ကတည်းကဗြိတိသျှသရဖူမှီခိုမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
6500 ဘီစီခုနှစ်, လူသား၏ကျွန်းဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်ကနေကွဲကွာ, ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဗြိတိန်ကြီးစိုးအောက်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
က Man ၏ကျွန်းအားလုံးကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားကြသည် dictate သုံးခုတမန်တော် (ဥပဒေများကို) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ အဆိုပါသုံးတမန်တော်နေသောခေါင်းစဉ်:
1931 အက်ဥပဒေကုမ္ပဏီ; နှင့်
အပါအဝင်က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းမှအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်:
• အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်း ကုန်သွယ်ထံမှအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများ။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေခွန်သူကိုတိုင်းပြည်များတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များထံ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေအားလုံးကြေညာရပါမည်။
• လွယ်ကူသောမှတ်ပုံတင်ခြင်း: ဒါဟာလူသား၏ကျွန်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, ဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့ process ကိုအတော်လေးလွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလူသားကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းမှတ်ပုံတင်ရန်အဖြစ်အနည်းငယ်သာနှစ်ခုအဖြစ်ရက်ပေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်အနည်းဆုံးမြို့တော်: က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းမှတ်ပုံတင်ရန်မျှလိုအပ်တဲ့နိမ့်ဆုံးကိုတက်-ရှေ့မြို့တော်ရှိပါသည်။ ဤအချက်ကိုသစ်ကို start-up ကုမ္ပဏီများသည်လွတ်လပ်မှုနှင့်တတ်နိုင်မှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ပေးထားပါတယ်။
• ဗြိတိန်နိုင်ငံအကောက်ခွန်နှင့်ယစ်မျိုးအခွန်: က Man ၏ကျွန်းဗြိတိန်နဲ့အကောက်ခွန်နှင့်ယစ်မျိုးသဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်။ ဤသည်အကောက်ခွန်အများစုယစ်မျိုးတာဝန်များကိုနှင့် VAT ကိုအဘို့, နှစ်ခုနယ်မြေများတစ်ဦးအဖြစ်ကုသနေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်။
• လူပျိုရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်က Man ၏ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့လိုအပ်ပါသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy များများဆက်ကပ်။ ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများကိုချွတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းများအတွက်ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင်နှင့်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အပိုဆောင်း privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်မှတ်တမ်း: က Man ၏ကျွန်းအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူနှစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး အစိုးရ.
• ဒီထက်ဗျူရိုကရေစီ: က Man ၏ကျွန်းများတွင်ထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဗြိတိန်သို့မဟုတ် Irish equivalents ထက်လျော့နည်းဗျူရိုကရေစီဖြစ်ကြသည်။
• ပညာတတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား: က Man ၏ကျွန်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလုပ်သားအင်အားကောင်းစွာပညာတတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
က Man နေထိုင်သူကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းများသောအားဖြင့် 20% ၏ပြားချပ်ချပ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်။ သို့သော်လူသားနေထိုင်သူတစ်ဦးကျွန်းအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအကျိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိဘယ်မှာကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအဘို့, 20% အခွန်နှုန်းကိုလျှောက်ထားမထားဘူး။ ဤစည်းမျဉ်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကမ်းလွန်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဒေသခံတစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောအားဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်ကိုပင်လျှင်မှန်သည်။
ထို့ကြောင့်, လူသား၏ကျွန်းအတွက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆင့်အတန်းအောင်မြင်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုက Man နေထိုင်သူတစ်ဦးကျွန်းနှင့်အတူမတည်ရှိပါဘူးကွောငျးတငျပွရမညျဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်မျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းက Man ၏ကျွန်းအတွင်းစေ့စပ်နိုင်ပါသည်။
ဒေသခံအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအစားမှာကင်းလွတ်ခွင့်ကော်ပိုရေးရှင်း Sterling £ 450 ၏နှစ်စဉ်ကင်းလွတ်ခွင့်တာဝန်ပေါင်း£ 50 တစ်ပုံစံတင်ပို့ရန်ကြေးပေးဆောင်ရပါမည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကုန်သွယ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုင်ပြီးတူသော passive စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အလွန်ကောင်းနေတယ်။
က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကျွန်း 2,380 GBP တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးပေးချေမှုမြျှောလငျ့နိုငျ (ဤကြေးမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်, အတွင်းရေးမှူးနှင့်ရုံး၏ကုန်ကျစရိတ်, ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်နှစ်စဉ်ပုံစံတင်ပို့ရန်ပါဝင်သည် ကြေး).
က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကျွန်း privacy ကိုပေးပါသည်။ ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကော်ပိုရိတ်များ၏အမည်များနှင့်အခြားအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှခန့်အပ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကျွန်းတစ်နှစ်ပတ်လည်ပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်နှစ်စဉ်ပြန်လာသည့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အားဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်း, နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဒါရိုက်တာကအတည်ပြု။
က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းနှစ်ပတ်လည်အကောင့်ပြင်ဆင်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လူသားမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များ၏ကျွန်းကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ပုံမှန်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်နေပါသည်။
- န်ထမ်းများ၏င်း၏ပျမ်းမျှအားအရေအတွက်က 50 သို့မဟုတ်နည်းပါးလာ
- က၎င်း၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်းစုစုပေါင်း 2.8 သန်း GBP ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းဖြစ်၏
- က၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် 5.6 သန်း GBP ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းဖြစ်ပါသည်
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးက Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းဘို့လိုအပ်ပါသည်။
က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကျွန်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မှတ်ပုံတင်များ၏အမှန်တကယ်အချိန်လျှောက်ထားသူသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ် name ကိုမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုအပေါ်မူတည်အဖြစ်။
တချို့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်, လွယ်ကူသောမှတ်ပုံတင်ရေး, ထည့်သွင်းဖို့ဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အရင်းအနှီး, ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာများထုတ်ပေးရေးအပါအဝင် privacy ကိုနည်းဗျူရိုကရေစီမရှိနှစ်ပတ်လည်မှတ်တမ်းများပုံစံတင်ပို့ရန်နှင့်ပညာတတ်ကျွမ်းကျင်: အပါအဝင်က Man ကင်းလွတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းမှအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ် လုပ်သားအင်အား။